Izibonelelo zokuThengisa ngokuZenzekelayo | Martech Zone
Izibonelelo zokuThengisa ngokuZenzekelayo
NgoMvulo, Meyi 6, 2013 NgeCawa, Meyi 5, 2013 UJenn Lisak Golding
Enye yeenjongo eziphambili zemibutho kukulungelelanisa iqela lokuthengisa kunye nelokuthengisa ukuze banxibelelane kwaye badibanise iinkqubo zabo zomsebenzi ngokukuko. Kwelinye icala, ukuthengisa kufuna ithala leencwadi lezixhobo kunye nenkqubo yokuvelisa okukhokelayo, ngelixa ukuthengisa kufuna ukukhululeka kokuhamba kunye nezibambiso zentengiso ezandleni zabo. Nangona imisebenzi yala masebe inokwahluka, isadibene kakhulu. Kulapho umbono we ukuthengisa okuzenzekelayo kungena.
Sisebenze neqela eFatstax, a usetyenziso olunentengiso lwe-iPad, kule infographic, ebonelela ngemibutho yeshishini nge-app evumela iqela labo lokuthengisa ukuba lifikelele ngokulula kwisibambiso sentengiso kunye neqela lentengiso ukuze likwazi ukulilayisha endaweni enye, njengendawo yokugcina izinto. Insiza ikwadibanisa neenkqubo zeCRM, ukuze ukwazi ukuqala ngokulula ukondla izikhokelo kunye nokufaka ulwazi ngakumbi malunga nezikhokelo. Umbono kukunika iqela elithengisayo ukuba lihambe, ngokuthi likwazi ukuthumela ngokulula iintetho, amaphepha amhlophe, iifrafikhi, njl. Omabini la maqela axelelwe ngezinto ekwabelwana ngazo kunye nezinto ezikhoyo, eziqhuba unxibelelwano olungcono ngaphakathi kwenkampani nakwithemba.
Le infographic ingena kwintengiso yokuhamba okuzenzekelayo iyinyani kwaye ingayitshintsha njani indlela umbutho wakho ofikelela ngayo kwimijikelezo yentengiso kunye nentengiso. Ikwabonelela ngoncedo "lwexesha lokwenyani" ngexesha lenkqubo yokuthengisa. Ngaba awungekhe uyithande ukuba ubunokunikwa ulwazi kwimizuzu yokuyicela? Yile nto eyenzelwa ukuthengisa okuzenzekelayo.
Ngaba usebenzisa naluphi na uhlobo lweeapps zentengiso ukuphucula intsebenzo yakho yokuthengisa? Ukuba kunjalo, ziziphi? Wakhe wayiva into enje ngaphambili? Usebenza njani "ekushukumeni kweshishini?"
tags: ukulungelelanisa ukuthengisa kunye nentengisoIqela lentengisoukuthengisa okuzenzekelayoUkunika amandla ukuthengisa
Usuku kubomi be-Intanethi
Meyi 24, 2013 kwi-3: 30 AM